ဗဟုသုတ – Shwe Naung
လူ့ဘီ လူးကြီး အန်ဒရီအ ကြောင်း နှောင်းခေ တ်လူတွေတော့ သိပ်ပြီး တီးမိခေါ က်မိ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့အမည်ကတော့ André René Roussimoff ဖြစ်ပြီး၊ ဧရာမလူကောင်ကြီးလည်း ဖြစ်သလို၊ နပန်းသတ် ရာမှာလည်း အလွန်ကြမ်းလို့ Andre The Giant လို့ အမည်ပြောင်ပေးခဲ့တာပါ။ (၁၉၄၆)ခုနှစ် မေ(၁၉)မှာ
မိမိ တို့ရဲ့ ကလေးေ တွကို ဒီငါး သုံးကောင် အကြောင်း ပြောပြေ ပးပါ..(ဘဝအတွက် အလွန်တန်ဖိုး ရှိပါတယ်) (၁) Chum salmon ငါး Chum salmon ငါး အမဟာ ဥ,ဥပြီးတာနဲ့ ဥရဲ့မလှ မ်းမကမ်းမှာ စောင့်ေ နခဲ့တယ်။ ဥကေပါက္လာတဲ့ ငါးကေ လးတွေဟာ အစာမရှာတ
ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ TV မှာ NGC Wild လိုင်းဖွင့်ပြီးတိရိစ္ဆာန်တွေ အမဲလိုက်တာကြည့်နေလိုက်တယ်။ ခြငေ်္သ့တစ်ကောင်က မြင်းကျားတစ်အုပ်ကို အမဲလိုက်နေတာ .. မြင်းကျားတွေပြေးတယ်။ လှည့်ပတ်ပြေးကြတယ်..ဝရုန်းသုန်းကားပေါ့..ဖုန်တွေတထောင်းထောင်း ထ အောင်အသက်ဘေးကလွတ်ဖို့ ရှိသမျှအားကုန်ထုတ်ပြီး ပြေးကြတာ..။ ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်ပိုသန်မာတဲ့ ခင်္သြ့ကြီးက နောက်ဆုံးတော့လည်း မြင်းကျားတစ်ကောင်ကိုလွှားခနဲ ခုန်အုပ်ပြီး နေရာမှာတင် ကိုက်စားလိုက်တယ်။ ခြငေ်္သ့က မြင်းကျားတစ်ကောင်ကိုလဲ မိသွားရော ခုနက
သား ဦး သားနှောင်း မယူေ ကာင်း ယူကောင်း (လက်ထပ် မင်္ဂလာပြုမယ့် မြန်မာ အ မျိုးကောင်း သားသမီးများ အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ) ဦးဇော်ရှိ သလားဗျို့ အော်ဟစ် အသံပေး၍ ဝင်ရောက်လာ သူမှာ မောင်သန့်ဇ င်ထွန်းဖြစ်သည်။ သြော် မော င်သန့် ဇင်ထွန်း ပါလား။
အခုမှ ထည်ထည်ဝင်ဝင် သိတယ် 🥺 အသားစားသတ္တဝါထဲ၌တွင်..သရဲ၊ သဘက် ဘီလူး၊ကျား၊ခြငေ်္သ့..နှင့် တခြားသောမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာများမှာ…အသားထဲ၌..နွားသာ ကိုသာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။နွားသား၏ အနံ့မှာလည်းအညှီဆုံးဖြစ်သလိုနွားသားစားခြင်းကြောင့်လည်းသွေးသား အားကောင်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ကြက်သေတော့.ကြက်သား.ဝက်သေတော့ဝက်သားလို့ခေါ်ကြသည်မှာအမှန်တိုင်းပင်ဖြစ်သော်လည်း..နွားသေတဲ့အသားကျတော့..အမဲသားဟူ၍.ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ.ထူးဆန်းလှသည့်အပြင်. ဘာကြောင့်အဲဒီလိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကို မသိသူကများပါသည်။ အမဲသားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာ.. မကောင်းသော.အမှောင်လောကသား တို့သာ ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်. စားကြသည်။ မက်မောကြသည်ဖြစ်၍ သာမှန်လူသားတို့ အနေနဲ့.ဖြူစင် သန့်ရှင်းသော အသား မဟုတ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ မသန့်ရှင်းဟုဆိုသည်မှာ…ရွံစရာကောင်းအောင်ညစ်ပတ်နေသည်ဟု ပြောသည်မဟုတ်ပါ။
ဖိလစ် ပိုင်နိုင်ငံ Quezon ပြည်နယ် ထဲက ဖိလ စ်ပိုင်ကျွ န်းစုထဲမှာ Alabat ဆိုတဲ့ ကွ ျန်းငယ်ေ လးတစ်ခု ရှိပါ တယ်။ ဒီကျွ န်းရဲ့ထူးခြားချ က်ကတော့ ဒီကျွန်းငယ်ေ လးကိုရောက်ဖူး တဲ့သူတွေတို င်းကတော့ ပုံစံတူတဲ့ လူ သားနှစ်ဦးကို အမြဲလိုလိုေ တွ့ရလေ့ရှိနေ တာပါပဲ။